Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ပြည်တွင်းသတင်း
သြစတြေးလျဝါရင့် သတင်းထောက်တဦးက သတင်းစာပညာ သင်တန်း ပို့ချ	ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ မေလ ၀၈ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၆ နာရီ ၂၃ မိနစ်	နေမျိုး	ရန်ကုန်မြို့ရှိ သြစတြေးလျသံရုံး အစီအစဉ်ဖြင့် သြစကြေးလျ ကလပ်တွင် သတင်းစာ ပညာရပ်နှင့် ပါတ်သက်၍ သုံးရက်ကြာ ...
ငြိမ်းချမ်းရေး ကဗျာဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာ၏ ၉၄ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ ကျင်းပ	ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ မေလ ၀၈ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၂ နာရီ ၄၂ မိနစ်	ငြိမ်းဝေ (ကဗျာ့အိုးဝေ)	ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းအတွက် တစိုက်မတ်မတ် ဦးဆောင်လှုပ်ရှားခဲ့ သည့် ကဗျာဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာ၏ ၉၄ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ ...
ဖမ်းထားသည့် လူငယ်များ ပြန်လွှတ်ပေးရန် မွန်လူငယ်ဖိုရမ် တောင်းဆို	အင်္ဂါနေ့၊ မေလ ၀၇ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၂၂ နာရီ ၄၃ မိနစ်	ယဉ်စနိုင်း	မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊ ရိုးဂိုးကျေးရွာတွင် သင်္ကြန်ကာလက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မွန်လူငယ်များနှင့် ရဲဝန်ထမ်း ရိုက်နှက်မှုကြောင့် ဖမ်းဆီးထားသည့် ...
“လူ့အခွင့်အရေး စကားသံ” ရုပ်သံ အစီအစဉ် ပြည်တွင်း ထုတ်လွှင့်ရန် စီစဉ်နေ	အင်္ဂါနေ့၊ မေလ ၀၇ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၄၅ မိနစ်	မင်းမင်း	မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး လူ့အခွင့်အရေး ပညာပေး ရုပ်သံ အစီအစဉ်အဖြစ် ပြည်တွင်း ရုပ်သံလိုင်းများတွင် ပြသနိုင်ရန် “လူ့အခွင့်အရေးစကားသံ” ...
KIO နှင့် အစိုးရ ပြန်တွေ့နိုင်ရန် ညှိနေကြဆဲ	အင်္ဂါနေ့၊ မေလ ၀၇ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၀၃ မိနစ်	ဖနိဒါ	ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် ကချင်လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ KIO တို့ မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် တွေ့ဆုံရန် ...
DKBA နှင့် နယ်ခြားစောင့်တပ် ပဋိပက္ခ တပါတ်အတွင်း ပြေလည်မည်မှန်း	အင်္ဂါနေ့၊ မေလ ၀၇ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၆ နာရီ ၅၄ မိနစ်	ဟင်္သာနီ (မွန်မြေ)	ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြု ကရင်တပ်မတော် (DKBA) တပ်နှင့် အစိုးရ၏ နယ်ခြားစောင့်တပ် တို့အကြား ပစ်ခတ်မှု ပဋိပက္ခများသည် ကရင်အမျိုးသားများ၏ ...
မိုးသက်လေပြင်းကြောင့် တရုတ်နယ်စပ် ဒုက္ခသည် စခန်းများမှ အိမ်ခြေ ၄၀၀ ခန့် ပျက်စီး	အင်္ဂါနေ့၊ မေလ ၀၇ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၁၃ နာရီ ၂၃ မိနစ်	ဖနိဒါ	မိုးနှင့် လေပြင်းမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ခြင်းကြောင့် တရုတ်နယ်စပ်၊ မိုင်ဂျာယန်အတွင်းရှိ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်စခန်း ၄ ခုမှ အိမ် အလုံး ၄၀၀ ခန့် ပျက်ဆီးခဲ့သဖြင့် ...
အစိုးရတပ် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ ပလောင် အမျိုးသမီးနှင့် ကျောင်းသားများ ထုတ်ပြန်	တနင်္လာနေ့၊ မေလ ၀၆ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၂၂ နာရီ ၄၆ မိနစ်	ဖနိဒါ	အစိုးရ တပ်ဖွဲ့များ၏ ပလောင်အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုများနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ ကျူးလွန်နေသည်ဟု ပလောင်အမျိုးသမီး ...
ချင်း အမျိုးသား ညီလာခံ ဟားခါးတွင် နှစ်မကုန်မီ ကျင်းပမည်	တနင်္လာနေ့၊ မေလ ၀၆ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၂၂ နာရီ ၂၀ မိနစ်	ထက်ထက်	ချင်း အမျိုးသား ညီလာခံကို ပြည်နယ်မြို့တော် ဟားခါး၌ ယခုနှစ် ကုန်ပိုင်းတွင် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မေလ ၂ ရက်မှ ၄ ရက်နေ့အထိ ...
ကားလမ်းကူးခုံးကျော်တံတားများ ရန်ကုန်တွင် ထပ်မံတည်ဆောက်မည်	တနင်္လာနေ့၊ မေလ ၀၆ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ၂၂ နာရီ ၀၈ မိနစ်	မေဦး	ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ ရထားလမ်းနှင့် ကားလမ်းဆုံရာ နေရာတိုင်းတွင် ကားလမ်းကူး ခုံးကျော် တံတားများ ထပ်မံ တည်ဆောက်သွားမည် ...
« ရှေ့ဆုံးမျက်နှာသို့ ရှေ့တမျက်နှာသို့ 1234567 8910 နောက်တမျက်နှာသို့ နောက်ဆုံးမျက်နှာသို့ »	စာမျက်နှာ9စုစုပေါင်း 511	ကြော်ငြာ
We have 80 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved